Yega-Inokuvadza Aluminium Foil Tepi |
MEIYUAN inogadzira uye inopa tepi kubva kuChina.
Kuzvikuvadza-aruminiyamu foil tepi ukobvu kubva pamakumi matatu emamirioni kusvika makumi manomwe emamirioni, upamhi 48mm, 50 mm, 100mm, nezvimwe, kureba10m kusvika 200m kana chero tsika tsika.
Yekuzvikuvadza Aluminium Foil Tepi yakafa yakapfava yakachena aluminium foil / PET-Foil Laminating sekutsigira, yakaputirwa neakakwira- kuita solvent-based / emulsion acrylic yekumanikidza-inonamira inonamira, isina kusunungura liner.
Yekuzvikuvadza Ruru - iyo yega yega tepi iri pamusoro peiyo yekupedzisira. Mupumburu hauna liner. Iyo yega ronda Aluminium Foil Tepi inopenya, yakapfava hasha yealuminium pepa, ine kumanikidza inonamira. Iyo foil inorapwa kune rimwe divi nesilicone kuti ive nyore kuburitsa pane kusununguka.
Yakakwira tensile simba, nyore kushandisa, kuderedza marara uye nharaunda-inoshamwaridzika; Nyore yekubatanidza saiti, pamwe nekuvandudzwa kwekubatana kushanda, inokodzera kusunga muchina.
Yekuzvikuvadza-alu foil inonamatira tepi inogona kushandiswa kune akawanda marudzi epombi paste nekugadzirisa.
Inokodzera kugadziridzwa kweradiator yekupedzisira mumafiriji uye mafiriza, uye kubviswa uye kudzivirirwa kwemagetsi emagetsi kuvhiringidzwa kwezvinhu zvakasiyana zvemagetsi zvigadzirwa. Inoshandiswa zvakanyanya.
Q: Tinogona kuva netsika yekudhinda?
Isu tinotsigira OEM sevhisi yetepi yedu zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi vedu kwemakore mazhinji.
Mubvunzo: Ndeapi ma parameter anodikanwa kuti uwane iyo chaiyo kotesheni
Mamiriro ekushandisa echigadzirwa, pasita, anoda pepa rekupinza kana kwete, ukobvu hwealuminium pepa, kutaurwa uye saizi zvinodiwa, huwandu hwaunoda.
Mubvunzo: Ndeipi pasuru yakaita？ Inogona kuitirwa？
Kupakata kwedu kunogona kuve maererano nezvaunoda, isu takashongedzerwa ne7 yekumisikidza michina.
Pashure: Aluminium Foil Tepi
Zvadaro: Kutonhora Yemamiriro ekunze Aluminium Foil Tepi
Isina moto Aluminium Foil Tepi
Angazvidzvisa Tepi Aluminium
Tepi Aluminium Foil
Aluminium Foil Girazi Yejira Tepi, Intertape Polymer Boka Aluminium Foil Tepi, Tepi, Imwe-yakatsigira Aluminium Foil Kutarisana, Yakapetwa-Yakatsigirwa Yakasimbiswa Aluminium Foil Kutarisana, Iyo Inopisa Sei Inogona Aluminium Foil Tepi Tora,